राजनीति : निशानामा २ नम्बर
नवीन झा आइतवार, श्रावण ८, २०७४
2777 पटक पढिएको
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) तेस्रो चरण निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । सरकारसँग आफ्ना मागबारे संवाद पनि जारी राखेको राजपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । चुनावमा सहभागी हुने कुरा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेपनि ऊ भित्रभित्रै चुनावी तयारीमा जुटेको छ । एक राजपा नेता भन्छन्, ‘सरकारसँग संवाद सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ ।’ राजपा मात्रै होइन, अन्य ठूला–साना दलहरू पनि तेस्रो चरणकै चुनावमा केन्द्रित छन् । सबैभन्दा बढी चासो कांग्रेसले लिएको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावले कांग्रेसको हैसियत एक नम्बरबाट दुईमा झरेपछि तेस्रो चरणको चुनावलाई उसले प्रतिष्ठाको विषय बनाउने छनक पाइन्छ ।
पहिलो ठूलो दल बनेको एमालेले पनि मधेशी दलहरूको आधार क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति बनाउने प्रयत्न छोडेको छैन । उनीहरू पूर्वएमालेमै रहेका मधेशी पृष्ठभूमिका नेता कार्यकर्तालाई ‘घर’ फर्काउने रणनीतिमा छन् । माओवादीलगायत साना दलहरू पनि अस्तित्व जोगाउन लागिपरेका छन् । यसअघिको २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशमा कांग्रेसले ५१, एमालेले ३७, माओवादीले १२ स्थानमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका थिए । उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदारसहितका सबै मधेशी पार्टीहरूले जम्मा ११ स्थान सुरक्षित गरेका थिए ।
त्यसअघि ०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले सबैभन्दा बढी ४२ सिट जितेको थियो भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले ३० सिट जितेर दोस्रो भएको थियो । कांग्रेसले १६, एमालेले ११, तमलोपाले ९ र सद्भावनाले ४ सिटमा बाजी मारेका थिए । २ नम्बर प्रदेशमा १ सय २७ वटा स्थानीय तह छन् भने २६ लाख ६४ हजार ७ सय ९२ मतदाता छन् ।
कांग्रेस : उदार देखिने रणनीति
२ नम्बर प्रदेशका सांसद, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापतिदेखि क्षेत्रीय सभापतिको संयुक्त बैठक कांग्रेसले ५ साउनमा काठमाडांैमा बोलाएको छ । लगत्तै उसले पार्टीनिकटको नेपाल प्रेस युनियनको प्रदेशस्तरीय भेला मधेशमै गर्दैछ । दुवै भेलाको मुख्य उद्देश्य तेस्रो चरणको निर्वाचन नै हो । ‘पहिलो चरणमा हामी सबै संगठनलाई भेला गरेर छलफल गर्छौँ,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादव भन्छन्, ‘कांग्रेसले केन्द्रदेखि मधेशसम्मै गर्न लागेको भेलापछि २ नम्बर प्रदेशको चुनावी रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।’
केन्द्रदेखि मधेशसम्मै गर्न लागेको भेलापछि २ नम्बर प्रदेशको चुनावी रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिनेछ। रामकृष्ण यादव सांसद÷केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
यसअघि भएको दुई चरणको निर्वाचनमा एमालेभन्दा ५० सिट पछि परेको कांग्रेस त्यसलाई उछिन्ने प्रयासमा छ । एमालेप्रतिको मनोविज्ञान मधेशमा नकारात्मक छ भन्ने विश्लेषणलाई कांग्रेसले ‘भजाउन’ खोजेको देखिन्छ । त्यसैले मधेशी दलहरूको संविधान संशोधनको मागमा कांग्रेस सकारात्मक देखिन्छ । त्यसो त मधेश कांग्रेसको आधार क्षेत्र नै हो भनिन्छ ।
त्यही भएर कांग्रेस मधेशलाई हत्तपत्त चिढ्याउन चाहँदैन । कांग्रेसले आफ्ना मधेशी नेता÷कार्यकर्तासामु मधेशको माग सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता नै त्यसकारण जनाएको हो । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्दा पनि मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसीहरूले संविधान संशोधन गर्न माग गरेका थिए । एक विश्लेषकका अुनसार, २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा कांग्रेसले मधेशको मुद्दाप्रति उदार रहेको सन्देश सक्दो दिन खोज्नेछ ।
एमाले : कसरी एक नम्बरमै टिक्ने ?
मधेश आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी निशानामा एमाले थियो । मधेशको मुद्दाप्रति ऊ अनुदार भएकै कारण संविधान संशोधन हुन नसकेको आरोप लागिरहँदा १ साउनमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले राजपासँग संवाद सुचारु गर्ने निर्णय गर्‍यो । केही सातादेखि एमाले र राजपाबीच विभिन्न चरणमा अनौपचारिक संवाद शुरु भएको समाचार नआएको होइन । यद्यपि, राजपाका नेताहरूले त्यसलाई अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेका छैनन् । एमालेले औपचारिक रूपमै संवाद गर्ने कुरा गर्नु २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनलक्षित देखिन्छ ।
त्यसअघि २९ असारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मधेशका विभिन्न पक्षमा काम गर्ने बुद्धिजीवीहरूसँग काठमाडौंमा मधेश मुद्दाबारे छलफल गरेका थिए ।
‘हाम्रो केन्द्रीय पदाधिकारीकै तहबाट मधेशको स्थलगत अनुगमन २ नम्बर प्रदेशमा हुन गइरहेको छ, एमाले २ नम्बर प्रदेशका संयोजक सत्यनारायण मण्डल भन्छन्, ‘त्यसपछि चुनावी रणनीतिलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउनेछौँ ।’ एमाले केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि मधेशमा सक्रिय नेताहरू आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै बाक्लै रूपमा कार्यक्रममा सरिक हुन थालेका छन् ।
हाम्रो केन्द्रीय पदाधिकारीकै तहबाट मधेशको स्थलगत अनुगमन २ नम्बर प्रदेशमा हुन गइरहेको छ। सत्यनारायण मण्डल संयोजक, प्रदेश नं २, एमाले
मण्डल भन्छन्, ‘शुरुदेखि नै निर्वाचनमै केन्द्रित भएकाले २ नम्बरमा अरूभन्दा हामी अगाडि छौँ ।’बैठकमा एमाले नेताहरूले २ नम्बरमा पनि कसरी अग्रता कायमै राखिराख्ने भनेर रणनीति तयार पार्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए । ओलीले २९ साउनमा मधेशी बुद्धिजीवीहरूसँग भनेका थिए, ‘हामी मधेशमा पनि १ नम्बरकै पार्टी हुन्छौँ ।’
माओवादी :‘मातृका कार्ड’को भर
२ साउनमा चुनावी समीक्षा गर्न बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा मातृका यादवले मधेशबारे रिर्पोटिङ गरे । यादवले पहिलो संविधानसभाझैं मधेशमा पुनः माओवादी बलियो भएको भन्दै ५० स्थानमा जित्ने आकलन प्रस्तुत गरे । ‘मैलै २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय साथीहरूकै रिर्पोटिङकै आधारमा यो तथ्य बैठकमा पेस गरेको हँु,’ उनी भन्छन्, ‘हामी विभिन्न पक्षहरूसँग आन्तरिक विमर्शमा छौँ । केही समयपछि हामी योजना र रणनीतिलाई अन्तिम रूप दिनेछौँ ।’ बैठकले तेस्रो चरणको निर्वाचनमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति लगाउने निष्कर्ष निकाल्यो ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् पार्टी परित्याग गरेका यादव मधेशमा लोकप्रिय नेताका रूपमा चिनिन्छन् । संविधानविरुद्ध मधेश आन्दोलनमा लागेका यादव त्यसलाई चुवावमा प्रयोग गर्ने सक्ने सम्भावना देख्छन्, माओवादी वृतका नेताहरू । यद्यपि, यादव खुलेर लागेका देखिँदैनन् । संविधान जारी भएपछि पुनः माओवादी प्रवेश गरेका उनले त्यसयता २ नम्बर प्रदेशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन । संविधान संशोधनको पक्षमा शुरुदेखि नै लागिपरेका उनी आन्दोलनरत पक्षहरूसँग हुने प्रायःजसो छलफल र बैठकमा सहभागी हुने गरेका छन् । भन्छन, ‘हामीले पहिला अरू पक्षको रणनीतिलाई पनि नियालिरहेका छाँ, त्यसपछि मात्रै हामी २ नम्बर प्रदेशको रणनीतिलाई ठोस रूप दिन्छौँ ।
फोरम : प्रतिष्ठाको लडाइँ
‘यू टर्न’ हुँदै वैशाखको तेस्रो साता निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको फोरम नेपाल पहिलो चरणकै निर्वाचनदेखि नयाँशक्तिसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ । यी दुई पार्टीबीच एकीकरणको चर्चा पछिल्लो समयमा बाक्लै रूपमा हुने गरेको छ । तर, औपचारिक रूपमा पार्टी एक भएको छैन । फोरम नेपालका एक नेताका अनुसार, आगामी साता हुने फोरम र नयाँशक्तिको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने सम्भावना छ ।फोरमले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राम्रो मत ल्याउन सकेन । दोस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत पूर्व र पश्चिमकै मधेशी मत फोरमले अपेक्षाअनुरूप ल्याउन नसके पनि ३१ र ३२ असारमा बसेको बैठकले मत परिणामलाई सन्तोषजनक मान्यो ।
हामीले पहिला अरू पक्षको रणनीतिलाई नियालिरहेका छाँँ, त्यसपछि मात्रै हामी २ नम्बर प्रदेशको रणनीतिलाई ठोस रूप दिन्छौँ। मात्रिका यादव नेता, माओवादी
केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र यादव भन्छन, ‘विभिन्न प्रतिकूलताका कारण हामीले सोचे जस्तो परिणाम ल्याउन नससेका हौँ, यद्यपि विगतको अनुभवबाट अगामी चरणको निर्वाचनको सामना गर्ने तयारीमा हामी छौँ । १ र ५ नम्बर प्रदेशको मधेश बाहुल्य क्षेत्रमा फोरमले जम्मा आठ वटा ठाउँमा जितेको छ । उनी भन्छन्, ‘तेस्रो चरणको निर्वाचनमा हामीले सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ । जसका लागि पार्टीले २ नम्बर प्रदेशको आठ वटै जिल्लामा केन्द्रीय अनुगमन र निरीक्षण समिति बनाएको छ ।’
साथै उनले आठ वटै जिल्लामा साउनको अन्तिम साता विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्दैछन् । ‘तेस्रो चरणमा एक महिनाअघि नै उम्मेदवारको नामसमेत सार्वजनिक गर्ने प्रचारप्रचारमा आक्रामक तयारी गर्दैछौँ ।’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्रले गठन गरेको आठ वटै जिल्लाका लागि अनुगमन समितिले रिर्पोट बुझाएलगत्तै उम्मेदवारको टुंगो लगाउछाँ ।’ यद्यपि, समितिले मधेशमा को–कोसँग तालमेल र सहकार्य गर्ने भन्नेबारे पनि अध्ययन गर्दैछ । यादवका अनुसार, यदि राजपा निर्वाचनमा आउने वातावरण बन्यो भन्ने हामी सबैभन्दा बढी प्राथमिकताका साथ ऊसँगै सहकार्य गर्न खाज्छौँ । फोरम नेपालका अर्का नेता तथा राजनीति समिति सदस्य अर्जुन थापा पनि औपचारिक रूपमै राजपासँग चुनावी सहकार्यको लागि प्रस्ताव लैजाने तैयारीमा रहेको बताउँछन् ।
राजपा : अस्तित्वको प्रश्न
२ नं प्रदेशको निर्वाचन राजपाकै आन्दोलनका कारण सरकारले २ असोजमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले राजपाकै समर्थनमा आफूहरूले निर्वाचन सारेको बताए पनि उनीहरूले यथास्थितिमा निर्वाचनमा भाग नलिने बताइरहेका छन् । यद्यपि, दोस्रो चरणको निर्वाचनमा १ र ५ नम्बरको मधेश बाहुल्य क्षेत्रमा खसेको मतले राजपा झस्किएको छ । अघिल्लो सातामात्रै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको राजपा पछिल्लो समय सरकारसँग विभिन्न तहमा औपचारिक र अनौपचारिक वार्तामा मात्रै सहभागी छैन, प्रमुख एमाले र राप्रपासँग समेत संवादमा सक्रिय रहेको छ । ‘संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ हामीले सबै पक्षसँग वार्ता गर्ने आन्तरिक निष्कर्ष निकालेका थियौँ,’ महासचिव केशव झा भन्छन, ‘संशोधनप्रति असन्तुष्ट राप्रपाका सासंदहरूसँग पनि हामीले संवाद गरिरहेका छौँ ।
यदि राजपा निर्वाचनमा आउने वातावरण बन्यो भन्ने हामी सबैभन्दा बढी प्राथमिकताका साथ ऊसँगै सहकार्य गर्न खोज्छौँ। योगेन्द्र यादव केन्द्रीय सदस्य, फोरम नेपाल
राजपाका नेताहरूका अनुसार, एमालेसँगको संवाद खासै सार्थक भइरहेको छैन । राजपाले सरकारकै तहबाट हुने कामहरू चाँडो हुने पर्ने भन्दै दबाब सिर्जना गरिहेको छ । सरकारसँग कै संवादपश्चात् राजपाको एउटा टोलीले अहिले मुद्दा फिर्ता र क्षतिपूर्तिका लागि अनौपचारिक तहमा काम गरिरहेको छ । झाका अनुसार, सरकारले अझै १२ जनालाई शहीद घोषणा गर्न बाँकी छ भने ४३ गम्भीर प्रकृतिका घाइतेहरूको आजीवन भरपोषण खर्च र मुद्दा फिर्ताको काम मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने गृहकार्य चलिरहेको छ ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट यी काम गराएलगत्तै संशोधनसमेत छिनोफानो हुनेगरी अघि बढाउनेमा राजपा र सत्ता गठबन्धन सहमत देखिन्छन् । ४ असारमा सत्ता गठबन्धनसँग छलफल गर्न पुगेका राजपा नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत त्यही आशयको थियो । छलफलपछि राजपाका नेताहरूले पहिला सरकारको तर्फबाट हुने कामहरू हुनुपर्ने भन्दै त्यसपछि संशोधनको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने बताएका थिए । १ र ५ नं को स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजपाकै कतिपय वरिष्ठ नेताहरू स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचनमा लागेपछि राजपा आफ्नो अडानमा टिक्न नसकेको हो ।
संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ हामीले सबै पक्षसँग वार्ता गर्ने आन्तरिक निष्कर्ष निकालेका थियौँ। असन्तुष्ट राप्रपाका सांसदहरूसँग पनि हामीले संवाद गरिरहेका छौँ। केशव झा महासचिव, राजपा
प्रमुख दलहरूसहित फोरम नेपालको ‘निर्वाचन मुभ’ र राजपाभित्रै बढदै गएको आन्तरिक द्वन्द्वले २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन रोचक हुने देखिएको छ । एक मधेश राजनीतिका विश्लेषक भन्छन्, ‘कांग्रेसको पुरानो गढ रहेको मधेश पछिल्लो समय आन्दोलनकारीको आधारक्षेत्रमा परिणत भएको छ । आन्दोलनको क्रममा रक्षात्मक हुन पुगेको एमाले र माओवादीले यस्तो अवस्थामा मधेशमा हुने चुनावमा कस्तो परिणाम हात पार्लान् ? तेस्रो चरणको चुनाव रोचक हुने देखिन्छ ।
चुनावी दाउमा ठूला नेताको प्रतिष्ठा आइतवार, कार्तिक १२, २०७४
लोकतान्‍त्रिक गठबन्धनमा बाँंटफाँटको किचलो शुक्रवार, आश्विन २७, २०७४
मधेशको चुनावी सन्देश : गुडबाई आन्दोलन शुक्रवार, आश्विन ६, २०७४